के हुँदैछ हिमालयन बैंकमा, राष्ट्र बैंकलाई थाहा छ ? - Aarthiknews
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय भएका कारण राष्ट्र बैंकका अगाडी पक्कै पनि धेरै जिम्मेवारीहरु छन् । जोखिमसँग सम्बन्धित केही निगरानी र अनुगमन मात्र होइन की आफू मातहतका बैंकलाई गलत क्रियाकलाप र गतिविधि नगर्न समेत पटक पटक राष्ट्र बैंकले सचेत गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि यस्तो नहुने हो भने बाफियाको उलंघन मात्र होइन की त्यसको असर सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्छ ।
यसो किन भनियो ? त्यसको कारण छ । राष्ट्र बैंकलाई मानिसहरु के आरोप लगाउने गर्छन् भने यसले साना बैंकलाई त पेल्छ तर ठुला बैंकले गरेका गैर कानुनी हर्कतबारे भने मौन छ । नेपाल कै एक पुरानो र महत्वपूर्ण बैंक हिमालयन बैंक माथि राष्ट्र बैंकले केही निगरानी बढाओस र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुनै पर्ने संचालन विधि र खर्चको पारदर्शिता कायम राखोस भन्ने माग सो बैंक सम्बद्ध केही व्यक्तिहरु कै छ ।
यसकारण रोकिंदैछ, सिडिसी ग्रुप
हिमालयन बैंकको स्थिती निकै खराब हुनसक्ने सो बैंक सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । आफ्नो नाम र पदीय जिम्मेवारी नखुलाउने सर्तमा बैक सम्बद्ध स्रोतले आर्थिकन्युजसँग भन्यो, ‘यदि अहिले नै राष्ट्र बैंकले आवश्यक खोजि र चासो नबढाउने हो भने मुलुकको एक स्थापित बैंक ९हिमालय बैंक० निकट भविष्यमा नै खराब स्थितिमा पुग्दैछ ।’
त्यसो त बेलायतको सिडिसी ग्रुपले हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हविब बैंकको शेयर खरिद गर्ने तर्फ चासो देखाएको खबर नेपालको बैंकिंग क्षेत्रको लागि उत्साहप्रद समाचार हो । तर, बैंकका केही संचालकहरु त्यसो होस् भन्ने चाहंदैनन् भन्ने आरोप त्यहींका कर्मचारीहरु लगाइरहेका छन् । किन उनीहरु बाधक बन्न चाहन्छन् भन्ने प्रश्नमा एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘त्यसो भयो भने हालको जस्तो रजाईं गर्न पाइंदैन भन्ने ति संचालकले बुझेका छन् ।’ उनले थप स्पष्ट पारे, ‘अहिले खरीद प्रक्रियामा मनपरी छ, कर्मचारीको बढुवामा नाताबादर नेवारबाद र जातीय राजनीति छ जुन एक संस्थागत पद्धतिमा सम्भव छैन अनि सिडिसी आयो भने उसले ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ लागु गर्छ ।
सवारी साधन खरिदमा व्यापक अनियमितता
हिमालयन बैंकमा खड्किएको सुशासनको अभाव बारे प्रमाण स्वरूप उदाहारण दिंदै बैंक सम्बद्ध स्रोत भन्छ–यसैवर्ष बैंकले सीइओ र दुईजना जनरल म्यानेजरको लागि सवारीसाधन खरिदगर्ने निर्णय गर्यो । सवारी सुविधा पाउने दुईजना म्यानेजर बैंक संचालक समितिका अध्यक्षका नजिकका नातेदार हुन् । त्यसैले उनीहरुको लागि सीइओको भन्दा दुईगुना महँगो गाडी किनियो । यो कुरालाई त बोर्डको तजबिजको क्षेत्र मान् सकियो तर यसमा अर्को कुरा पनि छ त्यो के हो भने मित्सुबिशी कम्पनीका ति दुई गाडीका ब्यापारी अर्थात् आपूर्तिकर्ता अरुकोही नभएर बैंकका अध्यक्ष मनोज बाबु श्रेष्ठका जेठा ज्वाईं अनिशलाल श्रेष्ठ हुन् । स्रोतको दाबी छ, ‘बैंकले जति रकम तिरेर ति गाडी खरिद गरेको छ त्यति रकम अरु ग्राहकले तिर्नु पर्दैन किनकी त्यसमा ठूलो डिस्काउन्ट हुने गर्छ । जुन डिस्काउन्ट बैंकले पाएन वा भनौ लिईएन ।’
त्यहाँ व्यक्तिगत नाता र लाभले ठुलै काम गर्यो । स्रोत भन्छ, ‘तपाई गएर सो कम्पनीको बिल हेर्नु भयो भने सबैकुरा स्पष्ट हुन्छ ।’ यो कम्पनीले बैंकलाई आपूर्ति गरेक ति दुई गाडीमात्र होइन केहिवर्ष अघि पनि दुइवटा गाडीहरु (मित्सुविसी आउटल्याण्डर र मित्सुबिशी एएसएक्स) हबिब बैंकका स्टाप, अजिज गिलको लागी खरिद भएको थियो । स्रोत भन्छ, “ त्यो मित्सुबिशी एएसएक्स त सो रुममा त्यतिकै थन्किएको थियो, पुरानो मोडेल नबिकेर तर त्यही सालको मूल्य तिरेर बैंकले किन्यो । उनीहरुको आरोप छ – यो कुनै काममा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया पुरा गरिएन । त्यति मात्रै पनि बैंक अध्यक्ष र बोर्डले भ्रष्ट्राचारजन्य काम गरेको पुष्टी गर्ने प्रयाप्त आधार हुनसक्छ ।
विनाधितो ऋण प्रबाह
यसबाहेक लियोन मोटर्स प्रालीलाई ठमेल शाखा मार्फत गाडी आयात ऋणको निम्ती ऋण दिइएको छ तर त्यसको बिरुद्ध कुनै धितो भने राखिएको छैन । उनीहरुको ग्यारेजमा केही गडी स्टक भएको अनुमान र व्यक्तिगत जमानीमा सो कम्पनीले ऋण पाएको छ । प्रश्न यो हो कि यदी कोही ब्यापारिक अनुभव र बैंकसँगको बिश्वास बिना नै बैंकमा आएर ‘मार्जिन अमाउण्ट’ मात्र देखाएको भरमा बैंकले त्यस्ताको एलसी खोल्न र ऋण दिन मिल्छ ?
यदि बैंकले प्रबाह गरेको ऋणको फेहरिस्ता हेर्यो भने पनि धेरै कुरा भेटिन्छ । खराब कर्जा काम देखाउन निर्दे्शिकाहरुको उलंघन गर्ने काम भएका दर्जनौ प्रमाण फेला पार्न सक्छन् । लियोन मोटर्सकै सन्दर्भमा पनि सो कम्पनीलाई ऋण दिन प्रक्रिया सुरुगर्ने सुनिल गोर्खाली हुन् जो ठमेल शाखाका तक्कालिन म्यानेजर र अध्यक्षका नातेदार हुन् । पछि त्यो गैर कानुनी काम गरेवापत उनी अध्यक्षबाट पुरष्कृत समेत भए जो त्यस्ता धेरै घटनामा संलग्न छन् तर कहिले पनि दण्डित भएका छैनन् ।
अध्यक्ष र संचालकका आफन्तको रजाईं
त्यसो त ठमेलबाट कमलादीमा बैंकको केन्द्रिय कार्यालय सार्दा समेत अनियमितता भएको छ । सो क्रममा पुराना कुनै पनि फर्निचर नयाँ अफिसमा ल्याइएन जवकी धेरै काम लाग्ने थिए । आखिर सबै मिल्काइयो र नयाँ किनियो त्यो पनी अरु कोहीबाट होइन बैंक अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठ र डाइरेक्टर प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठको सालो सुबर्ण कृष्ण श्रेष्ठको कम्पनी मार्फत ।
त्यो फर्निचरको मुल्यमा नै हेर्नुभयो भने प्रष्ट्र देखिन्छ कि भ्रष्ट्राचार कुन लेवलमा छ । त्यहाँ प्रयोग भएका निर्माण सामग्री पनि अधिकांश मनोज बहादुर श्रेष्ठ कै कम्पनी मार्फत चाइनिज ठेकेदारले आपूर्ति गरेका हुन् । ति ठेकेदारले गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी छ । काम सम्पन्न गरेर बुझ(बुझारत गर्ने तर्फ कुनै चासो छैन किनकी त्यहाँ साँठगाँठ छ ।
शाखा खोल्दा आफ्नैलाई मालामाल
किनबेचमा अनियमितता त कति हो कती यसको अर्को उदाहरण हो न्युरोडको जग्गा खरिदमा भएको गडबडी । यसबारे स्रोत भन्छ, ‘मनोजका आफन्त नै थिए त्यो जग्गा सम्पर्कमा ल्याउने व्यक्ति पनि । त्यही बेला न्युरोडमा लक्ष्मी बैंकले अझ चोकमा र चौकुना मिलेको जग्गा जति मुल्यमा किन्यो हिमालयन बैंकले त्यो भन्दा धेरै बढी मूल्य भित्रि र कम मुल्य पर्ने जग्गालाई हाल्यो ।’ उनले थपे, ‘त्यहाँ बिल्डिंग बनाउने कामको जिम्मा पहिले नै एम एल कायस्थ एण्ड कम्पनीलाई दिइएको थियो । जसमा ठेक्का दिने प्रक्रिया पुरा नै गरिएन किनकी सो निर्माता कम्पनीका मालिक अरु कोही नभएर बैंकका डाइरेक्टर प्रचण्ड बहादुरका छोरी ज्वाईं हुन् ।’
अहिले बैंकका सबै कर्मचारीहरु के अनुमान लगाई रहेका छन् भने अब त्यो बिल्डिंगको कुल लागत १ अर्बभन्दा बढ्ने छ किनकी यसअघि कमलादीको अफिसको खर्च पनि ५० करोड छोएको थियो । जव निर्माण र खरिदको काम अध्यक्ष र संचालकका आफन्तको हातमा पर्छ त्यहाँ पैसाको सर्वनाश निश्चित छ । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हुनत एमएल कायस्थ कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन् र कानुनी रुपमा काम गर्न पाउंदैनन् तर उनको श्रीमति पनि इन्जिनियर भएका कारण त्यहाँ प्रश्न उठाउने ठाउं छैन किनकी कम्पनि उनको नाममा दर्ता छ ।’ अब दरबारमार्गमा खोल्न लागिएको नयाँ शाखाको काम पनि त्यही कम्पनीलाई दिन लागिएको छ, फेरीपनि खरिद प्रक्रिया नपुर्याईकन ।
आफन्तकै कारण ई–बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंगमा अबरोध
स्रोतको प्रश्न छ, हिमालयन बैंकले किन अन्य बैंक जस्तो धेरै शाखा खोल्न नसकेको त्यो तपाइलाई थाहा छ ? उनैले दिएको जवाफ अनुसार, ई÷बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंगहरु सुरुहुन नसक्नुमा यो बैंकले चलाएको ‘टेमेनोस’ नामक सफ्टवेर जिम्मेवार छ । हुन त यो सफ्टवेर उच्चस्तरको हो र महँगो पनि छ तर यसको उच्च प्रविधि नै यहाँ समस्या बनेको छ । तर, सफ्टवेर कम्पनीको तर्फबाट सपोर्ट भने छैन । कडाई गर्न सक्ने अवस्था नै छैन किनकी सप्लायर कम्पनी अतेन्द्र बहादुर श्रेष्ठको हो जो अध्यक्ष मनोज र डाइरेक्टर प्रचण्डका काकाको छोरा हुन् ।
त्यसैले हरेक वर्ष बैंकले करोडौं रुपयाँ टेमेनोसलाई भुक्तानी गर्छ अतेन्द्रको कम्पनि मार्फत तर सपोर्ट भने पाउंदैन । स्रोत अगाडी थप्छ, ‘एनसीआर ब्रान्डका एटिएम मेसिन पनि अतेन्द्रले नै आपूर्ति गर्दै आएका छन् त्यसैले हिमालयन बैंकले एनसीआर कै एटीएम धेरै प्रयोग गरेको छ जवकी डीआइबोल्ड एटीएम मेसिन अझ राम्रो र बिक्रीपछिको सपोर्ट पनि ठीक छ ।’ अरु त के कुरा सामान्य सिसिटिभीको आपूर्ति समेत आफन्तबाट नै गराईदै आएको छ । तर, यस्ता कुरामा कसैले ध्यान दिएको छैन ।
कर्मचारीमा व्यापक असन्तुष्टीः कोही काखा, कोही पाखा
बैंकका एक कर्मचारीले बताए अनुसार मानब संसाधन विभागमा समेत उस्तै बेथिति छ । अघिल्लो महिना गरिएको एक कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा पनि सो देखियो । सूचना निकाल्ने, परिक्षा लिने औपचारिकता त पुरा गरिन्छ तर भर्ना भने अध्यक्ष वा डाइरेक्टरका आफन्तलाई नै गरिन्छ । परिक्षा हालमा उनीहरुलाई इन्टरनेटबाट जवाफ खोजेर लेख्न समेत छुट दिइएको चर्चा बैंकमा व्यापक थियो । ति कर्मचारीका अनुसार समिर आचार्य जो अध्यक्षका निकट मानिन्छन् उनैले परिक्षा गराउने जिम्मा पाएका थिए । पछि आचार्य, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष र बैंक अध्यक्षका नातेदारलाई निजका परिवारको उपचार खर्च वापत लाखौं दिइयो जवकी अरुले यस्तो सुबिधा पाउने सम्भावना नै छैन भने हुन्छ ।
ति कर्मचारीको आक्रोश थियो, के हामी चाहीं यो बैंकका कर्मचारी होइनौ ? यसबीच मृत्यु भएका र परिवारका सदस्य बिमारी परेका कर्मचारीको हकमा किन बैंक मौन छ ? अरु कर्मचारीले चाहीं आफन्त बिमारी हुँदा घरपायक सरुवा समेत नपाउने ? उनले थप गुनासो गरे, ‘कतिपय शाखामा काम गर्ने लाई थप भत्तापनि दिइन्थ्यो तर बिना जानकारी नै सो कटौती गरिएको छ । जसको कुनै कारण खुलाइएको छैन ।
कर्मचारीको क्षमता अभिवृदी र तालिममा भएको अनियमितता अर्को महत्वपूर्ण बिषय हो । पाकिस्तानी सह९महाप्रवन्धक (एसजीएम) लाई अमेरिकामा तालिम लिन पठाइयो जो ६ महिना पनि नेपाल बसेनन् के त्यो खर्चको नाश होइन ? त्यसबाहेक बिगत केही वर्षयताको सूची हेर्ने हो भने यो बैंकबाट तालिमको अवसर पाएका र तालिम खर्चको उपभोग गरेका कि नेवार समुदायका छन् या त संचालकका परिवारका सदस्य छन् । के अरुको चाहीं यस्ता तालिम पाउने अधिकार छैन ?